Abathuthukisi be-KDE basebenzela ukuthuthukisa ukusekelwa kweWayland | Kusuka kuLinux
Abathuthukisi be-KDE basebenzela ukuthuthukisa ukusekelwa kweWayland
Lydia Pintscher, uMongameli wenhlangano engenzi nzuzo i-KDE eV., owengamele ukuthuthukiswa kwephrojekthi ye-KDE, enkulumweni yakhe yokwamukela engqungqutheleni ye-Akademy 2019, wethule izinhloso ezintsha zephrojekthi, ezothola ukunakwa okwengeziwe ngenkathi yentuthuko eminyakeni emibili ezayo.
Okuqondiwe kukhethwa ngokuya ngevoti lomphakathi. Izinhloso zangaphambilini zachazwa ngo-2017 futhi zabandakanya nokwenza ngcono ukusetshenziswa kwezicelo eziyinhloko, ukuqinisekisa imfihlo yedatha yomsebenzisi nokwakha izimo ezikahle zamalungu amasha omphakathi.
Ngaphakathi kwezinhloso ezibalulwe enkulu ngukuqedwa kokushintshela eWayland. Wayland ibonakala njengekusasa ledeskithophu, kodwa ngendlela elikuyo njengamanje, ukusekelwa kwale protocol ku-KDE akukaze kulethwe ezingeni elidingekayo ukufaka esikhundleni ngokuphelele i-X11 njengeseva yemidwebo.
Kungakho eminyakeni emibili ezayo, kuhlelwe ukudlulisa i-KDE kernel iye eWayland, okuhlelwe ukuqeda ukushiyeka okukhona nokwenza imvelo ye-KDE isebenze ngaphezulu kweWayland ngokufanele futhi idlulisele i-X11 esigabeni sezinketho kanye nokuncika kokuzikhethela.
Lokhu kuthuthukisa ukungaguquguquki nokuhleleka kokusebenzisana ekuthuthukiseni uhlelo. Kuzicelo ezahlukahlukene ze-KDE, akukho kuphela umehluko ngokubukeka, kepha futhi nokungahambelani kokusebenza.
Isibonelo, amathebhu aqala ngokuhlukile eFalkon, Konsole, Dolphin, naseKate, okwenza kube nzima konjiniyela ukwenza ukulungisa iziphazamiso nokudida abasebenzisi.
Inhloso enkulu ukuhlanganisa ukusebenza kwezinto ezijwayelekile zohlelo lokusebenza, ezinjengezinsimbi eziseceleni, amamenyu okudonsela phansi namathebhu, kanye nokuletha amasayithi wohlelo lwe-KDE ekubukweni okukodwa.
Phakathi kwemisebenzi ukwehla kokuhlukaniswa kohlelo lokusebenza nokugqagqana kwesicelo nakho kukhonjisiwe kokusebenza komunye (isibonelo, lapho kunikezwa abadlali bemidiya abahlukahlukene).
Faka i-oda ngezindlela zokulethwa nokusatshalaliswa kwezicelo. I-KDE inikela ngezinhlelo ezingaphezu kuka-200 nezinqwaba zama-plugins, ama-plugins, nama-plasmoids, kepha kuze kube muva nje bekungekho ngisho nesiza senkomba esisesikhathini lapho lezi zinhlelo zizofakwa kuhlu khona.
Phakathi kwezinhloso ukwenziwa kwesimanje kwamapulatifomu lapho onjiniyela be-KDE basebenzisana khona nabasebenzisi, ukwenza ngcono izindlela zokwakha amaphakheji ngezinhlelo zokusebenza, ukucubungula imibhalo nemethadatha eza nezinhlelo zokusebenza.
Ngaphandle kwabo Abathuthukisi be-KDE bamemezele ukuqaliswa kokuxhaswa kwesikali okuyingxenye ngezikhathi zedeskithophu ezisuselwa kuPlasma eWayland.
Lesi sici sikuvumela ukuthi ukhethe usayizi ofanele wezinto ekubonisweni ngobuningi be-pixel (HiDPI), ngokwesibonelo, ungakhuphula izinto zesibonisi ezingakhonjiswa izikhathi ezi-2, kepha izikhathi ezi-1.5.
Izinguquko zizofakwa ekukhishweni okulandelayo kwe-KDE Plasma 5.17, okulindeleke ngo-Okthoba 15. I-GNOME ikwazile ukusebenzisa ukukala okuyingxenye kusukela kwinguqulo 3.32.
Kukhona nokuthuthuka okuningana kumphathi wefayela leDolphin. Uma kwenzeka kuvinjelwa kuzilungiselelo zokudlala okuzenzakalelayo kwedatha ye-multimedia kuphaneli yolwazi eseceleni, amafayela we-multimedia manje angadlalwa ngesandla ngokuchofoza isithonjana esihambisana nawo.
Isenzo esithi «Faka ezindaweni» sengezwe kwimenyu yefayela ukubeka umkhombandlela wamanje kuphaneli ngezindlela ezikhethiwe (Izindawo). Isithonjana esisha se-monochrome sisetshenziselwa ukuqala ukuphela, futhi kusetshenziswa izithonjana ezinemibala kuphela ezingxenyeni zokumisa.
Kufakwe isexwayiso esisha esiboniswayo lapho kuzanywa ukuqala ifayela ukuchofoza kabili uma ifayili lingenayo ifulegi lemvume elisetshenzisiwe.
Ibhokisi lengxoxo likuvumela ukuthi usethe okufinyelelekayo kumafayela anjalo, okulula, ngokwesibonelo, lapho ulayisha izithombe ezisebenzisekayo ezivela kumaphakeji azenzele wona, njenge-AppImage.
Si ufuna ukwazi kabanzi ngayo mayelana nezinqumo zephrojekthi ye-KDE ongazivakashela isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Abathuthukisi be-KDE basebenzela ukuthuthukisa ukusekelwa kweWayland
UMiguel Useche kusho
Phendula uMiguel Useche
I-Valve: izindaba ezihamba phambili ezithokozisayo ...